Hanitra Rafara, manoloana ny fipariahan’ity Coronavirus ity. Ny fahasalamam-bahoaka aloha no laharam-pahamehana ary tsiahivina fa tafiditra ao anatin’ny tetikasa koa izany, hoy izy. Io no hahafahana manandratra ny vahoaka hanalana azy anaty fahantrana. Tsy hoe tsy mandeha ny tetikasa hafa fa na izahay aza izao dia mijery ny any ifotony izay tolotra na « proposition » hisorohana izay mahaory ny vahoaka. Maro ny fotodrafitrasa efa tafatsangana tao anatin’ny herintaona na dia tsy neken’ny sasany aza ny Tanà masoandro ho atao, hoy izy. Mandeha aminay ny Emergence de Madagascar. Ny anjaranay tamin’io, hoy hatrany ny tenany, dia nametraka ny petra-kevitra tokony hitondrana ny fanatanterahana ny tetikasa na « conception » ary niainga tany ifotony ny fanadihadiana nataonay. Raha ny mikasika ny vokatra azo tsapain-tanana momba ny atao hoe « émergence » dia ny aty aminay no andeha ho resahako, hoy izy. Marobe ny vahoaka madinika efa nametraka tetikasa. Tena mitsangana matanjaka ny mpandraharaha malagasy mitambatra hanao tolo-tanana ireny fotodrafitrasa madinika ireny. Afa-po izahay, hoy hatrany ity sekretera jeneraly ity, ary mila tsaroana fa tsy vitan’ny filoham-pirenena irery ny fanatontosana ny IEM.